Ngeke kuphazamiseke ukuholwa kwezibonelelo ngenxa yamakhadi - Sassa | News24
Ngeke kuphazamiseke ukuholwa kwezibonelelo ngenxa yamakhadi - Sassa
Cape Town – ISouth African Social Security Agency (Sassa) isiphinde yagcizelela ekutheni abantu abangatatazeli uma amakhadi abo okuhola esephelelwa yisikhathi.
AbakwaSassa bathi ukuphelelwa yisikhathi kwala makhadi akusho ukuthi ngeke bayasiyithola imali yesibonelelo.
Sekuphele amasonto amathathu kulindelwe ukuthi uSassa ungene esivumelwaneni esisha sokuhlinzeka ngezidingo nabasePosini ukuze kube yibo abathatha umsebenzi wokuholela abantu izibonelelo zikahulumeni, kepha kuze kube yimanje lokho akukenzeki.
Amakhadi akwaSassa azophelelwa yisikhathi ngomhlaka-31 Disemba nonyaka, nokuqubula itwetwe kulabo abathola izibonelelo kuhulumeni ekutheni kungenzeka ukuthi bangasayithola le mali uma kuqala unyaka omusha.
Lowo oyisikhulu sesikhashana kwaSassa uPearl Bengu uthe amalungiselelo afanele enziwe neCash Paymaster Services, iPayments Association kanye nezitolo okuholwa kuzo ukuba bawamukele amakhadi noma esephelelwe yisikhathi njengoba kubhaliwe kuwo.
OwakwaSassa, uPaseka Lesatsi, uthi ingamanga imibhalo ezungeza ezinkundleni zokuxhumana eyalela abantu ukuba bavuselele amakhadi abo.
“Uma sesifikile isikhathi sokuthi kushintshwe amakhadi, yithi esizoxhumana nomphakathi.”
Nokho uLesatsi akazange acacise ukuthi izibonelelo zizoqala nini ukutholakala ePosini.
“Sicela ukuthi wonke umuntu abekezele, kodwa ngiyaqinisekisa ukuthi sizoxhumana nabo ngenqubekelaphambili.”
ISassa ihluleke ukuhlangabezana neminqamulajuqu kwaze kwaba kathathu ngoSepthemba ekutheni ifinyelele esivumelwaneni nabasePosini, njengoba ithi ifuna ukuqinisekisa ukuthi yonke into ihanjiswa ngendlela.